Odyssey miaraka AMD part1 | Avy amin'ny Linux
Odyssey miaraka am AM1 partXNUMX
pandev92 | | Fitsinjarana
Nandany ny sabotsy sy omaly alahady manontolo aho tamin'ny fanamboarana ny PC sy ny fitsapana zavatra isan-karazany ary ny fizarana GNU / Linux.
Tahaka ny mpampiasa sary AMD rehetra, heveriko fa efa fantatrao fa volana vitsivitsy lasa izay ny famoahana ny GPU acceleration ny h264, mpeg sns dia navotsotra, tamin'ny alàlan'ny vdpau ary koa ho an'ny Kernel 3.11 ny fitantanana herinaratra mahery vaika (dpm), izay hahatonga ny sary ho madio miaraka amin'ny mpamily maimaimpoana ihany.
Vonona ny hiala aho Kubuntu 13.10 Alpha 2, Nanavao aho, nametraka ny PPA an'ny Xorg edgers ary afaka nilalao lalao Steam ihany aho tamin'ny farany, haingana kokoa noho ny an'ny mpamily mihidy ihany koa.
Nametraka ny Kernel 3.11 rc3 aho, ary nampihetsika ny DPM (fitantanana herinaratra mahery vaika) ary niasa tsara ny zava-drehetra, mandra-pahatongan'ny PC dia nanomboka namono ny efijery nandritra ny 5 segondra ary niverina izy io, mandra-pahanginany.
Tonga ny olana taty aoriana, nanomboka namerina tamin'ny laoniny ny PC ..., teo aho efa nanomboka niahiahy, ka nametraka ny Kubuntu 13.04 aho ary lasa niaraka tamin'i Kernel 3.10.
Hatramin'ny Kernel 3,11 ny dpm dia tsy afaka navadika, nanandrana nanetsika vdpau tao amin'ny mpamily maimaim-poana aho, nanangona latabatra niaraka tamin'ireo saina niaraka tamiko aho, nametraka ireo fonosana vdpau aho ary tsy nisy, tsy mandeha izany.
Nilefa aho ary nanapa-kevitra ny hiandry, saingy nisy zavatra hafahafa nitranga, tampoka rehefa namerina ilay PC aho, nanomboka nahazo ny Kernel Panics, niditra tao amin'ny tabataba Kubuntu sy Kernel aho, niditra tamin'ny distro hafa niaraka tamin'ny usb velona sy ny tabataba Kernel, saika hametraka Windows mba hahitana raha may ny motherboard na nisy zavatra tapaka.
4 ora taorian'ny fikorontanan'ny kernel dia tonga tamiko ny hamerina azy io amin'ny toeran'ny orinasa, alefaso ny xboost ary manavao azy amin'ny kinova vaovao. Ary farany nanjavona ny fikorontanan'ny Kernel (misaotra an'i Athena nanampy ahy XD).
Farany, nanapa-kevitra ny hanandrana indray aho handamina vdpau ao Kubuntu, nanokatra kofehy vitsivitsy tao Phoronix aho, nanontany an'i Michael ny tenany (izay tsy namaly xD), nanontany tao amin'ny irc an'i Phoronix aho, nanaraka ny torolàlana aho ary tsy nisy, tsy mandeha izany.
Avy eo aho nanomboka nitady distro amin'izao fotoana izao izay saika ny farany ary sendra Fedora 19. Hoy aho anakampo: Andao andramo, nanomboka ny version 16 no tsy nisintomako azy akory. Nampidiniko ilay kinova KDE, Nanavao ny zava-drehetra aho ary nahita lahatsoratra avy amin'ny namako blocker Xenode System izay nahafahako nanamboatra ny distro hifanaraka amiko.
Eto aho no nijery ireo fonosana latabatra-vdpau-mpamily. Noheveriko fa ny fonosana haingam-pandeha ho an'ny shader, saingy raha vao napetraka aho dia tsapako fa nisy koa ny fihomboana h264, nanandrana tamin'ny Mplayer sy Flash aho ary tsapako fa 1% ihany no lanin'ny Mplayer, noho izany dia voavaha ny olana.
Ankehitriny hiandry an'i Kernel 3.11 izay mety ho ao anatin'ny fotoana fohy Fedora Ary amin'ny fomba anolorako hevitra ny fanandramana an'ity distro ity dia toa tsy ratsy toa ilay teo aloha ity kinova ity :).
Ho avy ny fizarana 2 rehefa mivoaka i Kernel 3.11.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Odyssey miaraka am AM1 partXNUMX
JC3 dia hoy izy:
Mamelà ny tsy fahalalako momba an'io lohahevitra io, saingy azoko tsara fa ny fametrahana mpamily mesa-vdpau-mpamaha dia mamaha ny olan'ny maripana ananan'ireo mpamily maimaim-poana ho an'ny sary ati. Miombon-kevitra aminao aho, miasa tsara ny Fedora 19 KDE, nametraka azy aho taorian'ny olana vitsivitsy niaraka tamin'i Chakra ary tena faly aho.
Valiny amin'i JC3
Tsia! Voavaha ny olan'ny mari-pana rehefa ho tonga ny kernel 3.11 amin'ny alàlan'ny fametrahana ny masontsivana radeon.dpm = 1 ao anaty grub.
Ireo mpamily latabatra vdpau dia mampandeha ny h264 amin'ny alàlan'ny gpu, toa ny karatra nvidia 😛
inona no holazaiko http://www.memegenerator.es/imagenes/memes/0/2280940.jpg
Na dia tsy mampiasa amd aza aho izao, tsara ny fahalalana ny aretin'andoha, raha sanatria ka manangana pc misy amd madio aho.
Ok, hotadidiko foana izany satria te-hanamboatra pc aho
3 dia hoy izy:
'Nametraka ny Kernel 3.11 rc3 aho, ary nampihetsika ny DPM (fitantanana herinaratra mavitrika) ary niasa tsara ny zava-drehetra, mandra-pahatongan'ny pc nanomboka namono ny efijery nandritra ny 5 segondra ary niverina izy io, mandra-pilamin'ny tany.'
Ahoana no nampavitranao ny dpm?
raha niasa tamin'ny voalohany dia tokony ho nijery ny loharano na ny mpankafy
manaova fampianarana momba ny fomba fanaovanao izay azonao
baiko antsipiriany, fomba fanao
Valio ny 3
Ahoana no nahitanao ny F18 ratsy?
Tsotra toy ny isaky ny roa isaky ny telo dia nisy zavatra nianjera, izany raha boaty rhythm, izay raha nahantona ny firefox raha niseho ny fampandrenesana mahafaly ny lesoka sns dia nandramako azy iny volana iny iny.
Raha ny fahitako azy dia tsara amiko ny milaza fa tsy mila matoky izy ireo olany efa nahazo azy tamin'ny AMD. Mandra-pahatongan'ny maro milaza fa miasa ny mpamily amd ary koa ny intel amin'ny linux (izay misokatra) dia tsy handinika solosaina finday misy mpanodin-tsaina amd.
maximi89 dia hoy izy:
Fa raha tsy ny CPUs no olana dia miaraka amin'ireo GPU ... ny olana lehibe indrindra dia ny fahazoana fampisehoana tsara avy amin'ny OpenGL ary mazava ho azy fa tsy mafana ny rafitra mitaky be dia be ary kely ny vokatra, raha ny fahitako olana tamin'ny AMD dia mafana foana. ! xd
Etsy ankilany, ny fotoana nananako Intel dia niasa tsara izy io, saingy nanao zavatra maivana fotsiny, izay nahatsapako fa ireo vokatra ireo dia niaraka tamin'ny LibreOffice izay niaraka tamin'ny AMD sy ny fampiasana an'i Debian dia niadana sy ratsy izy io, rehefa niova ho LinuxMint 14 aho dia lasa tsara kokoa amin'ny fampisehoana, ny famindrana lahatsoratra ary ny fanaovana zavatra izay tsy hain'ny hafa (Debian) ...
Mamaly an'i maximi89
Fa ny Intel kosa eo amin'ny haavon'ny AMD na NVidia? Izany hoe ny fitaovana. Manontany aho hoe maninona no mety havaoziko ny ekipako (izay mihoatra ny 12 taona) ary ny fampahalalana rehetra dia manampy.
Tsia, amin'ny ambaratonga nvidia tsy akaiky akory, izany no mahatonga ny processeur sary intel + nvidia. Raha ampitahaintsika amin'ny alàlan'ny amd ...
Lazao amiko fa ny karatra maha-sary anao dia HD 4xxxx (tsy fantatro hoe firy x ny xD) ampiasaiko ny Fedora sy ny hoe manafana tsy misy flash intsony: Eny, ny nataoko dia ny naka tahaka ny url ary nilalao azy ireo tao amin'ny vlc xD, nihena ny maripana mainka kely D:
Ao amin'ity pc ity dia apu 7650d izy, ao amin'ny solosaina finday raha toa ka radeon 4xxx xD ary mahatratra 90 degre ahaha, nividy mpankafy ho an'ny lap fotsiny aho! amin'ny fahavaratra dia mamontsina tahaka ny kisoa xd aho
Noho ny zavatra iray dia gaga aho hoe maninona ny Ubuntu no miadana amin'ny tabilao lehibe AMD, ary nilaza hoe "AMD Drive Not Supported".
Zavatra tsara ampiasako ny Intel amin'ny Debian PC-ko.
mpivaofy teny dia hoy izy:
Avelao aho hijery raha marina izany.
Manomboka amin'ny Kernel 3.10 mandroso, voavaha amin'ny mpamily maimaimpoana ve ny olan'ny hafanana ambony amin'ny karatra horonantsary ATI 4.xxxx?
Mankasitraka mialoha ny valiny aho.
Ernesto Manriquez dia hoy izy:
Namakivaky an'i Fedora aho satria te hanandrana ny rafitra DPM ary nahagaga izany. Torohevitra vitsivitsy.
1. Sanatria, fa aza mametraka Fedora tsy misy Fedora Utils. Tadiavo izany, sintomy, potseraho ny Next, Next and Next, ary ho vonona ny zava-drehetra ianao.
2. Mba hahazoana DPM tsara dia manoro hevitra anao aho hampiato ny fanandramana fanavaozam-baovao ary mankanesa amin'ity tahiry ity:
Ao no hahitanao ny kernel 3.11 farany an'ny Rawhide, tsy misy marika fanesorana mba hitazomana azy io haingana. Manavao izany isaky ny 3 na 4 andro izy ireo rehefa mivoaka ny fandaminana. Ny ambiny amin'ny fomba fananganana DPM (izay mametraka radeon.dpm = 1 amin'ny tsipika grub) amin'ny ankapobeny dia ho hitanao amin'ny fomba maro any.
3. Tsy majika ny DPM. Na izany na tsy izany, tsy mihazakazaka DotA aho amin'ny ampahefatry ny hafainganan'ny Windows, fa misy zavatra iray. Ny fanatsarana lehibe indrindra dia avy amin'ny APL Llano, Trinity ary Bobcat. Raha manana Radeon HD 7800 ianao ary miakatra, hadinoy ny momba an'i Fedora ary ampiasao Catalyst with Chakra.
4. Raha toa ka hihazakazaka KDE ianao, miaraka amina mpamily Radeon sy DPM maimaim-poana, dia tonga ny fotoana hampiasanao fikafika izay tsy miasa afa-tsy amin'ny KDE sy ireo mpamily Radeon (na Intel) maimaimpoana. Ao amin'ny console, amboary ny rakitra .bashrc ary apetraho ity manaraka ity.
fanondranana LIBVA_DRIVER_NAME = vdpau
fanondranana VDPAU_DRIVER = r600
fanondranana R600_DEBUG = sb
fanondranana KWIN_OPENGL_WS = oh
Ireo hatsarana ireo dia manao zavatra isan-karazany.
a) Ny roa voalohany dia mampandeha ny sosona VDPAU, hijerena horonantsary HD tsy misy fandaniana CPU. Tonga lafatra, indrindra, ho an'ny andian-tsarimihetsika C sy E APU (izay raha ny fanazavana, miasa toy ny hatsarana miaraka amin'ny DPM izy ireo)
b) Ny fahatelo dia mampihetsika ny fanatsarana fanandramana ao amin'ny mpandrindra aloka. Ity kaody vaovao ity dia afaka mampitombo ny fahombiazan'ny programa 25D sy lalao maherin'ny 3%.
c) Ny fahefatra dia mampihetsika ny backend EGL andrana ho an'ny KWin. Ity safidy ity, izay miasa amin'ny mpamily maimaimpoana ihany, dia mahatonga ny KWin hampiasa CPU tsy dia be loatra, hitazona ny tsiranoka mitovy.
Valiny tamin'i Ernesto Manríquez
Ireo isa ao amin'ny Phoronix, amin'ny AMD E-350. Ny tsanganana voalohany dia ny stock Ubuntu 13.04 (taloha), ny faharoa dia Catalyst, ary ny farany dia ny mpamily maimaim-poana miaraka amin'ny fanavaozana rehetra, DPM, ary kaody fandefasana andrana.
Hiandry ny voamadinika 3.11 hiovaova aho avy eo andramako ireo mpamily maimaimpoana indray! Soratako amin'ny evernote ny toro-hevitrao! Misaotra anao.
xavitokun dia hoy izy:
Manana solosaina misy amd athlon2 x3 cpu sy amd radeon HD 5750 aho ary nilavo lefona foana tamin'ny fampiasana GNU / Linux satria tsy mahomby hatrany ny mpamily, na ny rafitra iray manontolo mihintsy na ny lalao toa tsy dia tsara na mandeha tsara.
Misy olona afaka manampy ahy amin'ny sosokevitra sy fampianarana ve?
Mamaly an'i xavitokun
Eny, tsy nijaly tamin'ny olana mitovy amin'izany aho; Manana Kubuntu 13.10 64 napetraka aho ary tena mandaitra, te-hametraka ny Fedora 19 aho saingy tsy nety tamiko ny ampahan-tsary mba hametrahana ity fizarana ity, izay hany tokana tokony hizahako toetra, satria efa miaraka amin'i Kubuntu ihany aho.
Jose Jácome dia hoy izy:
Ny dia mahazatra ho antsika mpampiasa AMD (ary mampalahelo kokoa ho an'ireo mpampiasa sary azo ovaina toa ahy 🙁), fa ny zavatra tsara momba izany dia ny manohy manandrana ... Ho ahy, mbola tsy manana fanantenana be momba ny sary AMD aho fa manantena aho fa ny MIR sy Wayland miaraka amin'i Kernel 3.11 dia manome fanantenana farafaharatsiny !!!
Valiny tamin'i José Jácome
Tsy misy azo atao, tsy maintsy niverina tany amin'ny catalyst aho, ny mpamily maimaim-poana dia tsotra fotsiny ary mahatonga ahy tsy ho fantatra mialoha ny pc .., heveriko fa tsy maintsy vokatry ny hafanana be loatra izany nefa mazava ho azy fa tsy mampiseho ahy ny maripanan'ny apu ireo mpamantatra lm .., tsara Tsy afaka nilaza aho…
"Ka nanomboka nitady distro amin'izao fotoana izao aho izay saika ny farany indrindra dia sendra ny Fedora 19. Hoy aho anakampo: Andao andramana, satria ny andiany 16 no mbola tsy nampidiriko akory."
«…. toa tsy ratsy tamiko ity kinova ity toy ilay teo aloha »
Raha miaiky ianao fa tsy nampidina azy io hatramin'ny andiany 16, ahoana no ahazoanao antoka fa ratsy ilay teo aloha? Miteny irery ve ianao sa mandre fotsiny?
Valiny amin'ny devoly
Hadinoko ny nametraka an'io raha nanandrana ny kinova 18 tamin'ny live usb aho.
ChepeV dia hoy izy:
Tsara, nanapa-kevitra fotsiny aho hoe izay distro hapetraka amin'ny birao birao izay AMD daholo
Valiny amin'i ChepeV
Tito dia hoy izy:
Manana AMD E-450 aho ary manana Sabayon 64 KDE napetraka, efa io no distro izay nanana fampisehoana tsara indrindra tamin'ny fiasa.
Mamaly an'i tito
Che, tsy haiko ... toa ahy izany fa noho ny olana amin'ny sary dia ny miala amin'ny distro mankany amin'ny distro ..
Alao an-tsaina hoe ao amin'ny Fedora dia afaka manana korontana mitovy amin'ny kubuntu 13.04 ianao amin'ny dikan-teny ho avy. Ka inona no hataonao? mifamadika amin'ny kubuntu indray? .. Fiarahabana.
Eny, tsy haiko, amin'izao fotoana izao tsy afaka mampiasa Linux akory aho, miverina isaky ny 2 na 3 ora ny pc, irery ... ho hitantsika
Kde sy fedora dia bitika sy bitika xd
freebsddick dia xD maloto
Mbola tadidiko ny odyssey niaraka tamin'ny ATI nampidirina niaraka tamin'ny PC misy ahy ankehitriny (izay efa ho 6 taona). Tsy maintsy nanangona tanana ireo mpamily aho (tsy nisy Launchpad tamin'izany fotoana izany ary io no hany fomba ahafahana manana ny kinova farany, mitovy amin'ny nataoko tamin'ny PC taloha ho an'i Nvidia), kitiho ny fisie Xorg hampandeha tsara ny Compiz, sns. volana vitsivitsy, rehefa navotsotra ny Ubuntu 7.06, rehefa nankany amin'ny pejy ATI aho mba hisintona ny kinova farany, dia nilaza tamiko izy fa tsy atohana an'io intsony ny grafiko noho ilay kinova X.org vaovao (dia mijery ilay maodely izay aho fa tsy Eo amin'ny PC aho), ka niverina tamin'ny 6.10 aho. Taorian'ny 2 volana dia nividy ny Nvidia (8400GS) aho ary nahafinaritra ahy izany, ary nampiasa ny kinova farany an'ny mpamily foana aho ary mbola tsy nanome olana tamiko mihitsy.
Toa nihatsara ireo mpamily ATI, saingy mazava fa raha manitatra ny solosainako aho, na mividy motherboard ho an'ny Intel miaraka amin'ny sary Intel, na Intel na AMD miaraka amin'ny Nvidia tafiditra.
Noheveriko indray ny lahatsoratra iray nitaraina, avy any AMD indray, saingy hitako fa nahavaha ny olana ianao, na dia toa mitady troll aza ny lohateny
Namaha aho tamin'ny fametrahana windows ... xD ..., amin'izao fotoana izao dia miandry ny fanoloana ny apu, izay tokony ho tonga rahampitso, fa ndao, raha toa ka izany no mitranga amin'ny apu vaovao, dia mijanona hatrany ary toy izany, hoheveriko fa sendra bug tsara aho. kernel dia efa notateriko izany raha sanatria ka xD.
Lol ... amin'ny faran'ny volana dia mividy ny APU farany aho, ny A10 6500K heveriko fa na 6800, ho hitako ny fandehany rehefa vita ny fanamboarana ny fitaovako, raha efa fantatro fa tsy tokony nividy ny AMD / ATI aho fa ny mobo dia 100 US $ ary niaraka tamin'ny HDMI: 3
Eny, hampiasa mpamily fananana ary hialana amin'ny akorandriaka xD ...
gorlok dia hoy izy:
Mahaliana, hotadidiko ao an-tsaina izany. Izaho manokana dia mampiasa Ubuntu 12.04 ho an'ny ekipako, miaraka amin'ny Unity sy dock, ary ny ankamaroan'ny rindranasa Gnome. Fa tsara ny fahalalana. Daty tsara
Mamaly an'i gorlok
Yuriy Istochnikov dia hoy izy:
Zavatra hafahafa izany; satria amiko, namana Pandev, dia tamin'ny fomba hafa no nisehoany.
Ireto ny famaritana ny solosainko:
-HP Envy M6-1105dx
-AMD APU A10-4600M & RAM 6 GB. Ny ambiny tsy mila faritana.
Rehefa nametraka ny Fedora 19 teo amboniny aho dia nangotraka ilay zavatra haingana. Tsy afaka nametraka azy io aho raha tsy nisy fototra niaraka tamin'ny mpankafy 3 ary tamin'ny maody console (tsy mihomehy aho); raha Kubuntu 13.10, tsy niteraka hatairana izany. Raha ny marina, tamin'ny mpamily maimaim-poana dia nitondra tena VERY mitovy amin'ny Winbugs 8.1 ary miaraka amin'ny Catalyst dia mitondra tena tsara noho ny an'ny Winbugs 8.1. Raha ny tena izy, amin'ny tsy miasa dia 10 ° C ambany noho ny tamin'ny Windows. Milalao Kerbal aho (lalao iray tena tsy mahomby amin'ny fikirakirana multicore) amin'ny divay ary tafakatra 70-75 ° C fotsiny izany.
Amin'ireo zavatra fantatro:
-Tena ara-bakiteny ity heatsink laptop ity. Vita amin'ny alimo izy ary tsy manaparitaka diky.
-Mba te hanana fomba hananan'ny mpankafy feno aho, na dia mampiasa batterie bebe kokoa aza aho dia afaka mangatsiatsiaka kokoa ny Velikaya Slava noho ny letisy (tsy misy fotony misy mpankafy 5 eto ambany).
-Ny zavatra ity dia tena mila fanovana tampina mafana; Vao nividy fantsona Gelid GC-Extreme aho, izay ilay natolotry ny Tom's Hardware ho an'ity karazana olana ity.
-Mba manantena isika fa ny Fedora 20 dia miaraka amin'ny kernel miaraka amin'i Radeon DPM azo ampiasaina (19 tsy hamela ahy hanavao ny tsy misy vay; '(ary farafaharatsiny "ERROR 090D; Ny rafitrao dia nisy fanakatonana hafanana").
Valiny tamin'i Yuriy Istochnikov
Ho avy tsy ho ela: Miantso mpamoaka lahatsoratra
GLIMPSE: "SANDBOX" ho an'ny GNU / Linux